တရုတ်- ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း နင်းဘိုမြို့၌ ကျင်းပ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် နင်းဘိုမြို့၌ ဒုတိယအကြိမ် တရုတ်- ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ နှင့် နိုင်ငံတကာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပသည့် နေရာအား ဇွန် ၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဟန်ကျိုး ၊ ဇွန် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဒုတိယအကြိမ် တရုတ်- ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ ကုန်စည်ပြပွဲ နှင့် နိုင်ငံတကာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းပြပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်ရှိ နင်းဘိုမြို့၌ ဇွန် ၈ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဈေးဝယ်သူ ၇,၀၀၀ ကျော်ကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ဖွံ့ဖြိုးမှုစံနမူနာသစ်ကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း ၊ Win-Win အခွင့်အလမ်း မျှဝေခြင်း”ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ကုန်စည်ပြပွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ(CEECs)တို့အကြား ကုန်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။
“COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ CEECs တို့အကြား ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလားအလာဟာ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။။ သမားရိုးကျစက်မှုလုပ်ငန်းများ မှ ထွန်းသစ်စ စက်မှုလုပ်ငန်းများအထိ တိုးချဲ့နေပါတယ်။”ဟု တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး Wang Bingnan က ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုန်စည်ပြပွဲတွင် စီးပွားရေး ၊ ကုန်သွယ်ရေး ၊ သိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာ နှင့် ကျန်းမာရေးတို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည့် ပွဲပေါင်း ၂၀ ပါဝင်ကာ ပြပွဲကို ဇွန် ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်း မြေဧရိယာ ၂၀၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကုန်စည်ပြပွဲတွင်ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း ထူးခြားသော သွင်ပြင်လက္ခဏာများ နှင့်အတူ ရဟတ်ယာဉ်များ ၊ လေယာဉ်ငယ်များ ၊ ရွက်လှေများ နှင့် အခြားထူးခြားဆန်းပြားသော ထုတ်ကုန်များအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြသရန် ပြခန်းနေရာ သုံးခန်းရှိကြောင်း ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှ Wang Jian က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ဥရောပ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများ(CEECs)တို့အကြား ကုန်သွယ်မှုပမဏသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀ ဒသမ ၁၃ ဘီလီယံ ရှိပြီး နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှု ၅၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China-CEEC expo kicks off in east China’s Ningbo
HANGZHOU, June9(Xinhua) — The second China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair opened Tuesday in Ningbo, east China’s Zhejiang Province, attracting more than 7,000 purchasers.
Themed “FosteringaNew Development Paradigm, SharingaWin-Win Opportunity,” the expo aims to boost trade between China and Central and Eastern European Countries (CEECs).
“Amid the COVID-19 epidemic, the trade cooperation between China and CEECs has gone against the trend and is expanding from traditional industries to emerging industries,” said Wang Bingnan, China’s vice minister of commerce, at the opening ceremony.
In the first quarter of this year, the trade volume between China and CEECs reached 30.13 billion U.S. dollars,ayear-on-year increase of 50.2 percent. ■
1.Aerial photo taken on June 8, 2021 shows the main venue of the 2nd China-Central and Eastern European Countries (CEEC) Expo in Ningbo, east China’s Zhejiang Province. (Xinhua/Jiang Han)